Chelsea Oo Heshiis Shaqsi Ah La Gaadhay Difaaca Real Madrid Ee Danilo Iyo Qiimaha Uu Stamford Bridge Ku Iman Karo. - Laacib.net
Chelsea Oo Heshiis Shaqsi Ah La Gaadhay Difaaca Real Madrid Ee Danilo Iyo Qiimaha Uu Stamford Bridge Ku Iman Karo.
Kooxda Chelsea ayaa heshiis shaqsi ah la gaadhay difaaca ree Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Danilo sida lagu xaqiijiyay warbaahinta dalka Brazil ee Globoesporte. Antonio Conte ayaa muhiimada kowaad siinayay in uu Juventus kala soo wareego Alex Sandro laakiin in Old Lady ay soo diiday dalab 70 milyan oo euros ah ayaa Blues ku cadaadiyay in ay Danilo si buuxda ugu jeedsato.
Laakiin in Danilo uu Stamford Bridge ku soo biiro waxaa ka xigta in Chelsea ay ogolaato bixinta lacagta ay Real Madird xidiga ree Brazil ku qiimaysay oo ah 30 milyan euros, waana lacag kala badh ka yar intii ay Juventus ku soo diiday in Chelsea ay kula wareegto Alex Sandro.
Sida lagu xusay warbixinta Globoesporte, 26 sano jirkan ree Brazil ee Danilo ayaa Chelsea la gaadhay heshiis shaqsi ah wuxuuna sugi doonaa haddii ay Chelsea iyo Real Madrid ay heshiis ka gaadhi doonaa arintiisa. Laakiin wargayska Madrid ka soo baxa ee AS ayaa sheegay in Zidane uu wali doono in Danilo uu kooxda sii joogo inkasta oo uu Dani Carvajal yahay doorashadiisa kowaad.
Real Madrid ayaa Danilo kula soo wareegtay 31.5 milyan euros waxayna kala soo wareegtay kooxda FC Porto balse iyada oo jamaahiirta Los Blancos ay xili ciyaareedkii hore colaad wayn u muujiyeen xidiga ree Brazil ayaa keentay in uu ogolaado ku biirista Stamford Bridge.
Danilo ayaa xili ciyaareedkii dhamaaday kulamo isku dhaw goolal iska dhaliyay waxaana ka mid ahaa kulankii Copa Del Rey ee ay Real Madrid tartanka uga hadhay markaas oo ay jamaahiirta Madrid si xun ugu oriyeen Danilo laakiin in Chelsea ay heshiis la gaadhay xidigan ayaa siinaysa fursad uu Premier leaque-ga kaga ciyaari karo.
Manchester City iyo Juventus ayaa sidoo kale ka mid ahaa kooxaha doonayay saxiixa Danilo laakiin iyada oo Manchester City lacag qaali ah kula soo wareegtay Kyle Walker ayayna hadda ka mid ahayn kooxaha doonaya saxiixa Danilo. Si kastaba, heshiiska uu Danilo ugu biirayo Chelsea ayay ka hadhsan tahay in labada kooxood ay lacagta ka heshiiyaan.